Ndị njem nleta ndị kpebiri ileta mba ndị mara mma nke Israel na- enweta ohere pụrụ iche iji nwee ezumike na ụsọ Oké Osimiri Mediterenian ma ọ bụ na-enweta usoro ọma nke a pụrụ inweta na Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ. N'otu oge ahụ, ndị njem nwere ike idozi esemokwu nke ụlọ ma dozie otu n'ime hotels, nke dị na Israel nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu.
Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, Israel
Oké osimiri dị na meteoric bụ ọdọ mmiri nnu nke dị na ya. Ọ na-akwalite ahụ ike nke ahụ ma na-eje ozi dịka ihe mgbochi maka ọtụtụ ọrịa. Obodo Israel, nke di n'osimiri ya, bu na ha di njikere inye ndi obia ha abughi nani ulo ndi ozo, kamakwa otutu usoro nke usoro ahu ike. Ị nwere ike depụta ụlọ ndị a ma ama nke Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ (Israel):
Leonardo Plaza Dead Sea Hotel bụ nkeji 5 na-esi n'ụsọ osimiri ahụ. Ndị ọbịa na-anọ n'ime ụlọ ya ga-enwe ike ịnụ ụtọ panorama dị egwu nke na-emepe n'Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ. Enwere ebe ntụrụndụ na ebe nchekwa dị na saịtị nke na-enye mma na ọgwụgwọ ịhịa aka n'ahụ. Ndị ọbịa pụkwara ịbanye na ọdọ mmiri ahụ, nke nwere mmetụta ọgwụgwọ.
Daniel Dead Sea Hotel dị n'ime obi nke obodo Israel a na-ewu ewu nke Ein Bokek, njem nkeji nke atọ site n'ụsọ oké osimiri. Na ókèala nke mgbagwoju anya, e nwere ma ọdọ mmiri nke ime ụlọ na n'èzí, bụ nke na-ejupụta na mmiri si n'Oké Osimiri Nwụrụ. Na mgbakwunye na ọgwụgwọ ahụike, ị nwere ike ịga na ntụrụndụ, gaa na sauna, na-ekiri.
Oké Osimiri Oasis Dead Sea - nke dịkwa na ebe Ein Bokek na ihe kachasị amasị ya na ụdị e ji wuo ụlọ ahụ, a na-aha ya dịka Moroccan. N'ụlọ nkwari akụ ị nwere ike igwu mmiri na ọdọ mmiri (n'ime ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), gaa na ebe dị mma, nọrọ jụụ na saa sauna ma ọ bụ Turkish bat.
Hotel Spa Club dị nso n'ụsọ Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, ebe dị anya n'ọdụ ụgbọ mmiri dị naanị minit 2. A na-eji ọnọdụ dị jụụ na nke udo mara ụlọ nkwari akụ ahụ. A na-enweta nke a site n'ịkwalite ụfọdụ mmachibido iwu nke ndị ọbịa: afọ ha nwere ike ịbụ ihe na-erughị afọ 18, a naghị ekwe ha anwụrụ anwụrụ na iji ekwentị mkpanaaka. Tụkwasị na nke ahụ, a ma ama ụlọ nkwari akụ ahụ maka usoro ọma ya, ọtụtụ n'ime ha na-eduzi ya site na iji mpempe Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ. Ezigbo ọdọ mmiri ime ụlọ na n'èzí, e nwere ebe pụrụ iche maka sunbathing.
Ulo Israel n'Izo Osimiri Mediterenian
A na-asa mmiri dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke obodo ahụ n'Oké Osimiri Mediterenian, ụsọ oké osimiri na-ebupụta ọtụtụ kilomita, n'ogologo ya n'ogologo osimiri ndị kasị dị ọcha. Ulo Israel ndi no n'osimiri Mediterenian bu ndi ajuju na obodo ndi ozo: Tel Aviv , Herzliya , Netanya , Haifa , Ashkelon na Ashdod . N'etiti ụlọ ọrụ kachasị ewu ewu ị nwere ike depụta ihe ndị a:
Kamel Carmel Forest Spa Resort - nke dị na obodo Haifa, nwere ọnụ ọgụgụ nke kpakpando ise, a na-ewerekwa ya dịka otu nhọrọ kachasị mma n'ụlọ. Nke a bụ n'ihi ọnọdụ ya pụrụ iche: ọ dị n'etiti oké ọhịa, ya mere ndị ọbịa nwere ike ịnweta ikuku kachasị mma. N'ebe ọha na eze na-enwe ụfọdụ ihe mgbochi: ebe a anaghị ekwe ka anwụrụ ọkụ ma kwuo okwu n'ekwentị. Ịnabata usoro ndị a na-eme ka udo dị jụụ. Naanị mmadụ ndị ruru afọ iri na isii nwere ike ịghọ ndị ọbịa.
Ụlọ oriri na nkwari akụ 1926 - dịkwa na Haifa. Ọ na-agụnye ụlọ ndị nwere ụlọ abụọ, otu n'ime ha nwere ọnụ ọgụgụ mmefu ego ọzọ, ọ dịghị elu eletrik, nke ọzọ na-enyekwa ọnọdụ dị mma.
Isrotel Tower Hotel dị na Tel Aviv, njem nkeji 2 site n'ụsọ osimiri. Ọ dị n'ime ụlọ 30-storey, ihe dị iche ya bụ mmiri mmiri a na-adịghị ahụkebe nke e wuru n'elu ụlọ, site na ebe ahụ a na-ele anya na Oké Osimiri Mediterenian.
Tel Aviv Embassy Hotel dị na Tel Aviv, nke dị n'akụkụ osimiri. Ọ nwere ụdị ihe ọgbara ọhụrụ, nke kwekọrọ na 50 nke narị afọ nke iri abụọ. Ọ na-enye ụlọ ndị e kere iji mepụta ákwà ndị mara mma, a na-enyekwa ụtụtụ nri ụtụtụ nke ụtụtụ kwa ụtụtụ.
Obodo kacha mma n'Izrel
Obodo kacha mma na Israel na-anọchite anya hotels ndị na-abụ nke ụbụrụ 5 na 4. A mara ha site n'inweta ụlọ dị jụụ na ihe niile dị mma na ọrụ dịgasị iche iche nke enyere ndị ọbịa.
Na mba Israel, ụlọ iri ise na-anọchite anya ndị na-eme njem nleta dị otú a na-echefu echefu ma na-ewu ewu:
Hotel Royal Beach site Isrotel Exclusive Collection - nwere osimiri ya dị jụụ na Oké Osimiri Uhie. Na mgbakwunye na ịsa ahụ n'oké osimiri, ndị ọbịa nwere ike ịga n'otu n'ime ọdọ mmiri atọ dị n'èzí, zụta ezigbo ọkụ na tebụl pụrụ iche, gaa na ebe nchekwa ahụ. E nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na saịtị na-elekọta nri ndị obodo na Europe. Na 9 kilomita site na nkwari akụ ahụ, e nwere ogige ntụrụndụ mara mma "Underwater Observatory".
Isrotel King Solomon - otu n'ime nhọrọ kacha mma maka ịnọchite anya hotels na Israel maka ezinụlọ nwere ụmụ. Ọ na-adị na nso nso n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, nkeji isii na-aga ije site na ya. A na-ahazi ọtụtụ ememme maka ụmụaka na mpaghara ya, enwere ọdọ mmiri ndị dị mkpa, ebe a na-egwuri egwu, ebe a ị nwere ike ịnye ọrụ na-elekọta ụmụaka ma na-azụ nwa ahụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụmụ pụrụ iche. Maka ndị nne na nna nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe nri ndị French dị.
Egwurugwu Royal Garden Hotel ama ama maka mpaghara ya nke ọma, ọ nwere ogige aka na ọdọ mmiri ọdọ mmiri. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nke na-arụ ọrụ na họtel ahụ, na-enye nri nri maka nri ụtụtụ, a na-enyekwa ihe oriri maka nri ehihie na nri abalị. Maka umuntakiri ka ha nwere mpaghara egwu pụrụ iche. N'anyasị, ndị ọbịa nke ụlọ nkwari akụ ahụ ga-enwe ike ịṅụrị ọṅụ na mpaghara ebe nkiri ahụ, ebe ha na-egosi ihe nkiri na Las Vegas.
Hotel U Suites - Oké Osimiri site na Oké Osimiri - ọ bụ nke klas nke okomoko, ndị ọbịa ga-enwe ike ịnọ na ụlọ ndị dị, ebe e nwere ihu ihu ihu na echiche mara mma na ọdọ mmiri na hydromassage bath. Na ókèala nke nkwari akụ ahụ, e nwere nnukwu oghere ntụrụndụ na-enye ọtụtụ ọgwụgwọ ọrịa.
N'etiti ndị kasị mma hotels kpakpando na Israel, ị nwere ike ịmata ihe ndị a:
Obodo Red Sea dị n'akụkụ Eilat Airport . Otu osimiri dịpụrụ adịpụ bụ minit 10 site n'ụkwụ nke ebe a na-edebe ụlọ oriri na ọṅụṅụ Maman Beach, bụ ebe ndị ọbịa pụrụ ịnụ ụtọ nri ụwa. Maka ndị na-eleta ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ a nwere ego nke pasent 20.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Eilat Eilat dị na marina mara mma nke Eilat ma bụrụ ụgbọ mmiri nwere ụlọ. Ndị njem ga-enwe ike ịgbazite ụlọ n'ime ọnọdụ ụgbọala ma ọ bụ ịgafe Osimiri Eilat.
Hotel Astral Maris - na mgbakwunye na ụlọ ọrụ dịka okenye na ọdọ mmiri ụmụaka, e nwere ọbụna ụlọ oriri na nkwari na ụlọ nzukọ.
Cheap Hotels na Israel
Maka ndị njem na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụlọ dị oké ọnụ, ụlọ ala ndị dị ala na Israel na-enye, nke a na-edepụta na edemede 3 na nke 2.
Ọ ga-ekwe omume ịkọba ama ụlọ akụ ndị a ma ama nke Israel :
Ụlọ na Eilat Hotel dị nso na Nature Reserve "Coral Beach" na Ọdụ Ụgbọ Mmiri "Underwater Observatory" . Ọ nwere ọdọ mmiri n'èzí, ubi mara mma na ụlọ elu.
C-Hotel Eilat dị nso na ebe nkiri dị ka North Beach na Dolphin Reef. N'ebe a, ezinụlọ ndị nwere ụmụ nwere ike ịnweta ebe obibi, ndị okenye na ọdọ mmiri ụmụaka dị na saịtị, e nwere sauna na ebe a na-eme ahụike, ebe egwuregwu ụmụaka, ọrụ nlekọta ụmụaka.
Obodo Astral dị 700 mita site na North Beach. A na-eji nri nri ụtụtụ eme ihe n'ụtụtụ kwa ụtụtụ. Na n'ókèala ahụ, e nwere ọdọ mmiri na ebe a ga-ezu ike.
Hotel Astral Coral na- enye ọnọdụ dị mma maka ndị okenye na ụmụaka. Kwa ụbọchị a na-enye nri ụtụtụ maka nri ụtụtụ. E nwere nnukwu ọdọ mmiri nke nwere nnukwu ọnụ ụlọ maka sunbathing. Ụmụaka nwere ike iwepụta oge n'ime ụlọ egwuregwu.
Ịkpụ aka na mint
Ihe osise nke afọ ọhụrụ na mbọ - dị mfe ma dị mgbagwoju anya, dị mma ma mara mma
Sofia Vergara na Joe Manganello: alụmdi na nwunye na-ezighị ezi na nwunye na di
Kedu otu esi egbutu osisi ime ụlọ?
Ọgwụ nje maka ọrịa urethritis
Cuisine nke Costa Rica
Nanny maka Pope: 9 ndi di ndi dinara ndi nkuzi umu ha!
Black currant mmanya n'ụlọ
Karịa ịgwọ nwa ahụ na mgbaàmà mbụ nke oyi?
Egwuregwu 2018 - ejiji ejiji, ọnọdụ, novelties, antitrends
Kedu ka esi akụ kuku n'ụzọ ziri ezi iji nweta ezigbo owuwe ihe ubi?
Uwe ụmụaka maka New Year
36 nri nri oyi nke bara uru
Ihe omuma ihe omuma banyere uwa - oru na usoro
Slim Adele chịrị ihe mkpuchi nke Ndị mmadụ mma
Uwe isi na n'akụkụ
Akpụkpọ anụ ọla kọpa Pandora
Ụdọ dysplasia - na mgbaàmà na ọgwụgwọ, esi egbochi kansa?
Gwyneth Paltrow na ụmụaka na-aga South America
Buru kabeeji na agwa